Dagaal lagu dilay Taliyihii ilaalada Cali Guudlaawe iyo askar kale oo ka dhacay duleedka Jowhar | Somsoon
Home WARAR Dagaal lagu dilay Taliyihii ilaalada Cali Guudlaawe iyo askar kale oo ka...
Dagaal lagu dilay Taliyihii ilaalada Cali Guudlaawe iyo askar kale oo ka dhacay duleedka Jowhar
Ciidamo ka tirsan maamulka Hir-Shabeelle, gaar ahaa ilaalada khaaska ah ee madaxweyne ku-xigeenka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe iyo Al-Shabaab ayuu galabta dagaal culus ku dhex maray deegaan dhaca koonfurta magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Inta la xaqiijiyay lix ruux oo uu ku jiro taliyihii watay ciidanka ayaa Hir-Shabeelle looga dilay dagaalka oo in ka badan saacad ka socday deegaan lagu magacaabo Maandheere oo fatahaad uu ka sameynayay Wabiga Shabeelle.
Cabdi Xasan Cali oo ahaa taliyihii ilaalada madaxweyne ku xigeenka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe iyo shan askari oo kale ayaa lagu dilay dagaalka.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay ciidamadu gaareen deegaanka Maandheere oo koonfur bari kaga beegan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hir-Shabeelle.
Ciidamada ayaa halkaas u gaaray sidii ay u xakameyn lahaayeen fatahaad uu Wabiga Shabeelle ka sameynayey deegaankaas, waxaana intii ay ku howlanayeen joojinta fatahaada Wabiga weerar gaadmo ah ku qaaday dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, waxaana halkaas ka qarxay dagaal culus.
Lama oga inta uu dhanyahay khasaaraha Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalka, waxaana goobtii lagu dagaalamay haatan gacanta ku haya dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dadka ku nool deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dib u fureen biyo xireenkii ay sameeyeen ciidamada Hir-Shabeelle, isla markaana biyaha uu fatahay Wabigu ay jareen wadada xariirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar.
Ciidamadii Hir-Shabeelle ee dagaalka la galay Al-Shabaab ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar oo kolkii horaba ay ka baxeen.
Article horeSomalia hands protest letter to Kenyan Ambassador
Article socoda Dowladda Soomaaliya oo go’aan ka soo saartay duullimaadyada Kismaayo iyo Kenya